Kismaayo News » Xisbiyodii ugu horeeyay oo la sharciyeeyay
Xisbiyodii ugu horeeyay oo la sharciyeeyay
Kn: Gudiga doorashooyinka qaranka ayaa shahaadooyinkii aqoonsiga gudoonsiiyay ilaa iyo 8 xisbi oo kamid ahaa xisbiyo horay isu diiwaan galiyay.
Munaasabad ay goobjoog ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaano ka socday labada gole, ra’iisul wasaare ku xigeenka iyo saraakiil kale oo ka tirsan xukuumadda Kheyre hogaaminayo ayaa shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay gudoomiyeyaasha 8 xisbi.
Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaran ayaa sheegay in sideeddan xisbi ay soo buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa, ayadoo ay wali jiraan xisbiyo badan oo is diiwaan galiyay laakiin aan soo dhamaystirin shuruudihii looga baahnaa.
Xildhibaanad Fowsiya Xaaji aadan oo xisbigeedu kamid ahaa xisbiyada la ansixiyay isla mar ahaantaana ku hadlaysay magaca xisbiyada shahaadooyinka la gudoonsiiyay ayaa tibaaxday inay dadaal dheer u soo galeen sidii xisbiyada siyaasadeed loo meel marin lahaa.
Xisbiyada la sharciyeeyay ayaa waxaa kamid ah;
Xisbiga Umadda Soomaaliyeed
Xisbiga Midnimada iyo Qaranka Soomaaliyeed
Xisbiga Midnimada Bulshada Soomaaliyeed
Xisbiga Midnimada iyo Jamhuuriga
Xisbiga Qaranka iyo Dimuqraadiyadda
Xisbiyadan ayaa kamid ah xisbiyo tiro badan oo horay loo diiwaan galiyay laakiin aan sharciyad helin, waxaana dib u dhaca ku yimid hirgalinta nidaamka axsaabta badan loo aanaynayay hakadka ku yimid sharciga axsaabta oo mudo dheer qaatay in la meel mariyo.
Waxaa la odorosayaa in doorashada 2020 ay ku tartamaan axsaab isla mar kaana ay dadku codkooda u ritaan nidaam ku dhisan qof iyo codkii. Laakiin su’aashu waxay tahay suurogalnimada arintaasi.